theZOMI: Burma News International - March 27, 2013
Burma News International - March 27, 2013
Chinese timber resumes in Kachin state
Hundreds of Chinese owned trucks laden with timber have crossed from Kachin state into China over the past few weeks. Timber being transported to China has increased during the recent lull in fighting between Kachin Independence Army (KIA) and Burma army.
Two Burmese monks were arrested by the Bangladesh border security force, BGB, on Thursday ataborder checkpoint located at Teknaf and Cox’sbazar highway where they entered into Bangladesh illegally, said an authority report.
American ambassadors visit Kayah state to discuss landmine eradication
The US Assistant Secretary for Conflict and Stabilization Operations Mr. Fredrick Barton attendedapress conference in Loikaw for discussions on conflict resolution and landmine education during his first trip to Kayah state in Myanmar. Mr. Barton was accompanied by US Ambassador Derek Mitchell during the visit to the Kayah's state capital city. Both US politicians met with Kayah State Minister Khin Maung Oo for frank discussions about assistance for landmine victims, the peace process and other items related to development of the state.
New monthly news journal to be published in Chin state
Khonumthung News Group will start publishingamonthly print newspaper in Burmese in May. The news group just received the green light from the Ministry of Information and Publication Department (Copyrights and Registration Division). A registration card was issued for the monthly publication on March 22.
ပဲခူးတိုင်း မင်းလှ၊ နှင့်ဇီးကုန်းမြို့နယ်တို့တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ယနေ့နေ့လည်က ဆူပူဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းမှ ဒုက္ခသည်များ ပြည်တွင်းပြန်နိုင်မည်ဟု KRC သဘော ထားထုတ်ပြန်
ပြည်တွင်းစစ် ချုပ်ငြိမ်းပြီး စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်မှသာ ဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ဒုက္ခသည်ရေးရာကော်မတီ (KRC) မှ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သျှမ်း-ကယား ဆွေးနွေးပွဲမှ ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိလာဟု SNLD ပြော
လားရှိုးမြို့၌ ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲမှ တိုင်းရင်းသားများ အချင်းချင်းကြား၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် အစိုးရကြား ပိုမိုခိုင်မြဲသော ယုံကြည်မှုရရှိလာကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ဝင် SNLD ပါတီပြော ခွင့်ရသူ စိုင်းလိတ်ကပြောသည်။
လိုင်ဇာဒေသသို့ စီးပွားရေးသမားများ ပြန်လည် ၀င်ရောက်လို
ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်သည်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့တွင် လူစည်ကားလာပြီး တရုတ်ကုန်သည် စီးပွားရေးသမားများနှင့် ကချင်စီးပွားရေးသမား အယောက် (၂၀)ကျော်က ၄င်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် နေရာများ နေ့စဉ် လိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်း လိုင်ဇာမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဂရန်နော်အောန် ကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှ လုပ်ကိုင်မည့် နေပူတောင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူထု ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုအား ရခိုင် အစိုးရမှ တောင်ကုတ်မြို့တွင် ယမန်နေ့က ပြူလုပ်ခဲ့သည်။
စားနပ်ရိက္ခာ အကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင်အတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်မည့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရေးသုံးစွဲမှုများမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်းခွဲခန့် သုံးစွဲသွားမည်ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော် က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။
BGF နှင့် ရဲအဖွဲ့ ပူးပေါင်း၍ မြ၀တီမြို့မှ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဇုံတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲအဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ ရာဘ (ခေါ်) မြင်းဆေးရောင်းဝယ်သူ ၄ ဦးကို မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နွေဦးကာလသို့ ရောက်ရှိလာချိန် မီးဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် အတွက် မြန်မာပြည်ဘက်မှ တရုတ်လုပ် မီးသတ်ကားများ ပိုမိုဝယ်ယူနေသဖြင့် တရုတ်နယ်စပ် ရွှေလီကားဈေးကွက်တွင် မီးသတ်ကား အဝယ်လိုက်နေကြောင်း ကားပွဲစားများ အဆိုအရ သိရသည်။
ကော်သူလေ-ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး(KYO) သည် အမျိုးသားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးလုပ် ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း မတ်လ ၂၅ ရက် နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းအပေါ် ပါတီခေါင်းဆောင်အချို့ ကြိုဆို
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၆၈ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်း အနားတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း အပေါ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်အချို့က ကြိုဆိုလိုက်သည်။